ko htike's prosaic collection: Boat Trip in London and Some Burmese People.
Yes,6weeks after the cyclone and the dead bodies are still floating around. Many millions are still homeless and have nothing to eat.It is hard to findasingle word to describe those who can dance and sing over the dead bodies like this except 'Cannibals Performing the Evil Dance'
Unless, of course , they have worked their hearts out for the last6weeks to rescue and resettle the cyclone victims, so that they are now celebrating the success of their hard work.
I just hope that they can carry on dancing forever.
I could hardly believe my eyes to see those ruthless idiots enjoying while their country men are suffering without shelters and foods.
I serious do not think that they are Burmese. Burmese people are gentle, kind and not like those people.
They are evil and should not represent as Burmese Association.
If they really enjoy boat trip, why don't they haveatrip at Boglay and Lutputtar.
since the beginning of this world, animal and human being always having opposite feeling that's why no more comment on those animal any way.
သံရုံး သဘောင်္ပွဲဟာ နာဂစ်မဖြစ်ခင်ကတည်းက စီစဉ်ထားတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ပွဲလာတဲ့ သူတွေတိုင်း လူသားချင်းစာနာစိတ်မရှိဘဲ ပျော်နေသူတွေလို့တော့ ပျောလို့မရပါဘူး။ နိုင်ငံခြားမှာ နေကြတဲ့လူတွေက သိတဲ့အတိုင်းပဲ အလုပ် ဒါမှမဟုတ် ကျောင်းသားတွေဆိုရင် အလုပ်နဲ့ကျောင်းပဲ လုံးပန်းနေရလို့ စိတ်အပန်းဖြေရုံလိုက်ကြတဲ့ သူတွေလည်းပါပါတယ်။
အဲဒီတော့ ငါးခုံးမတစ်ကောင်ကြောင့် တစ်လှေလုံး ပုပ်တယ်ဆိုသလိုမျိုးပဲ။ လူတစ်စုကြောင့် ကျန်တဲ့လူကောင်းတွေကို ဒုက္ခမရောက်စေချင်ပါ။
အခုဟာက ဓာတ်ပုံတွေနဲ့ တစ်ကွ တင်ထားတာဖြစ်လို့ မဆိုင်တဲ့ ကာယကံရှင်တွေကိုယ်စား ပြန်လည်စဉ်းစားပေးစေချင်ပါတယ်။
ကျွန်တော်ပြောတာကို ကိုထိုက် နားလည်သဘောပေါက်လိမ့်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
Fighter ဆိုတဲ့သူခင်ဗျား ... လူဆိုတာ ကိုယ့်အခြေအနေနဲ့ကိုယ်ရှိကြပါတယ်။ သူများကို အော်နေတာ ခဏထားပါဦး။ ခင်ဗျား ကိုယ်တိုင် ဘာတွေများ လုပ်ပြီးပြီလဲ။
I agreed with "cms"....
မြန်မာတွေ စိတ်ဓာတ်မကောင်းတာ အခုမှတော့ မဟုတ်ဘူး။ ဟိုးအရင် နှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းက။ အစိုးရကြောင့် မကောင်းဘူး ပြောနေမယ့်အစား လူတိုင်းက ကိုယ့်ဘာသာ ကောင်းတဲ့ စိတ်ဓာတ် ရှိဖို့လိုသေးတယ်။
ကိုထိုက် ကိုကျနော် တစ်ခုပြောချင်တာတော့ အရည်မရ အဖတ်မရတွေ လျှောက်ရေးနေတာထက်စာရင်၊ တကယ် အကျိုးရှိမယ့် စာတွေကိုရေးစေချင်ပါတယ်။ အရမ်းကလေးကလားဆန်တဲ့ အခုလို ပို့စ်တွေကို ရှက်တတ်မယ်ဆိုရင်တော့ ပြန်ဖျက်ကို ဖျက်သင့်တယ်။ အဲ့ပွဲမှာပါတဲ့သူတွေဟာ နာဂစ်စ်ကြောင့် မပါရဘူးဆိုရင် အခုလောလောဆယ်မှာ ကိုထိုက် တစ်ယောက်ရော အိမ်မှာ ထိုင်ငိုနေ၊ ထိုင်ပြီး ဘာမှမလုပ်နိုင်မကိုင်နိုင်ပဲနေ နေပါသလား?
လူတိုင်းမှာ ကိုယ်စီဘ၀တွေရှိတယ်၊ အဲ့လိုပဲ အထိုက်အလျောက် ရှင်သန်နေကြတာပဲ။ ဒီလိုပြောလို့ ဒုက္ခသည်တွေကို ကျနော် မစာနာဘူးမပြောပါနဲ့၊ လူတိုင်း ကိုယ်တတ်နိုင်တဲ့ အတိုင်းအတာအထိလုပ်ပေးနေကြတာပါ။ $1000 လှုမှ တကယ်သနားတတ်သူ၊ $1 လှုသူက အလကားနှမ်းဖြူးသူ ဆိုပြီးသတ်မှတ်လို့မရပါဘူး။ လူတိုင်း တတ်နိုင်သမျှလုပ်ပြီး သူတို့ဘ၀ကို သူတို့ဆက်လျှောက်နေကြတာပါ။
မြန်မာပြည်သူတွေ အတွက်တကယ် အကျိုးရှိတဲ့ blog တစ်ခုအဖြစ်ရပ်တည်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ သူများကို လက်ညှိုးထိုးရင် ကိုယ့်ကို လက်လေးချောင်းပြန်ထိုးနေတယ်ဆိုတာ အရင်သတိရပါ။
ကိုgulu ခင်ဗျား ကိုထိုက်ပြောတာ ရှင်းပါတယ်။ နာဂစ်ကြောင့် ဒုက္ခရောက်နေသူတွေအတွက် ငိုနေတာလည်း မပါသလို၊ တပြားလှူတယ်၊ တစ် မီလျှံ လှူတယ်လည်း မပါပါဘူး။ ဘဝတွေ မရှိကြပါဘူး၊ ဝမ်းနည်းပက်လက် နေကြပါလည်း မရည်ရွယ်ပါဘူး။ သူပြောချင်တာ တစ်ခုပဲ ကျွန်တော်မြင်ပါတယ် .. အဲဒါက သံဃာတော်တွေတောင် ကံဆောင်ထားပြီး … သံဃာသတ်၊ လူသတ်နေသော အာဏာရှင်ရဲ့ ဒေါက်တိုင်တွေကို ထောက်ပံပေးနေသော အထောက်အပံတွေ အဖြစ် မြန်မာလူမျိုးတွေ ဖြစ်မလာအောင် မှတ်တမ်းတင် ထားတာဆိုတာကို သေချာ ရေးထားပါတယ်။
ကျွန်တော်ကတော့ အရည်မရ အဖတ်မရ ရေးတယ်လို့ မထင်ပါဘူး။ ခင်ဗျားတွေးကြည့်ပါ .. သံဃာတွေကို ရိုက်တာ သန်းရွှေနဲ့ စစ်ဗိုလ်တွေ မဟုတ်ပါဘူး။ စစ်သားတွေ မဟုတ်ပါဘူး၊ သူတို့ထောက်တိုင် သာမန် မြန်မာလူမျိုးတွေ ဖြစ်နေတာကို မေ့မထားပါနဲ့။ နောက်မှ စစ်သားတွေက သေနတ်နဲ့ လိုက်ပစ်တာပါ။
ဒီတော့ ရန်ငါ ပြတ်သားရမယ်ဆိုတာကို လုံးဝ အပြည့်အဝ ထောက်ခံပါတယ်။
ပျော်ချင်ရင် ပျော်လို့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ပျော်တာ အချိန်နဲ့ နေရာ မှားနေပါတယ်လို့ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် ထင်မြင်မိပါတယ်။
မြန်မာတွေ အမှတ်မရှိကြဘူးလို့ ကျွန်တော်တော့ အပြောမခံနိုင်ပါ။ ကိုgulu လည်း အမှတ်ရှိပါစေ ဒါမှ မဟုတ် တိုင်းပြည်နဲ့ လူမျိုးကို မှန်ကန်စွာ ချစ်တတ်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
17 June 2008 at 20:29
ဗို့ cms နအဖ အားပေးများရဲ့ ရှေ့နေ လုပ်မနေနဲ့ မျိုးချစ်တဲ့ မြန်မာ (ကိုယ်မျိုးကိုယ် ချစ်ခြင်းကိုမဆိုလိုပါ မြန်မာပြည်တွင်ဒုက္ခ ရောက်နေသော လူသန်းပေါင်းများစွာ ကိုချစ်ခြင်းကိုဆိုလိုသည်) မှန်ရင် အဖြူ အမဲ သဲသဲကွဲကွဲ ဖြင့်ရန်သူကို ရန်သူလိုမြင်တက်ပါ။
အမိုက်ကို အမိုက် လို့မြင်ပါ၊ နအဖ အားပေး အမိုက် တွေအတွက် ရှေ့နေလိုက်စရာမလို့…….
ဒါနဲ့ ygnman မင်းမှာကော် စိတ်ကောင်းရှိရဲလား။
gulu အတွက်ကတော့ ဘ၀ဆိုတာဘာလည်း၊ ရှင်သန်ခြင်းဆိုတာဘာလည်းလို မေးခြင်းတယ်၊
မှတ်ချက်။ ။UK မှာနေတဲ ဘ၀နဲ့ ရှင်သန်ခြင်းတွေ နဲ့တော့မဖြေလိုက်ပါနဲ့ လူဘ၀မှာ နေရတဲ့ တခနတာ လူဘ၀ကို လူဟူသောအသိဥဏ်နှင့် လူလိုနေရသော အချိန်ကိုဆိုလိုသည်။
ရှေ့နေလုပ်တာလား မလုပ်ဘူးလားဆိုတာကတော့ ခင်ဗျားမှာ စဉ်းစားတတ်တဲ့ ဦးနှောက်ရှိရင် သိပါလိမ့်မယ်။ လူမိုက်အားပေးဆိုတဲ့ အလုပ်မျိုးကို ကျွန်တော်လည်း ၀ါသနာမပါဘူး။ အခုဟာက တခြားမဆိုင်တဲ့သူတွေ ဓားစာခံဖြစ်နေမှာစိုးလို့ပါ။
နအဖအားပေးတွေရဲ့ ရှေ့နေ လုပ်ချင်ရင် ယူကေကိုတောင် လာစရာမလိုဘူး။
ခင်ဗျားလည်း လူဟူသောအသိဥာဏ်နှင့် စဉ်းစားပြီး လူလုပ်နိုင်ပါစေ။
cms Boat trip မှပါတဲ့ မြန်မာတွေက မြန်မာပြည်က လာတာ၊ ခင်ဗျားပြောတဲ့ တခြားမဆိုင်တဲ့သူတွေ ဆိုတာ ဘယ်သူကိုဆိုတာလည်း ဘယ်ကလာတဲ့သူမို့လို့လဲ့၊ ကျွန်ပ် လူဟူသောအသိဥာဏ်နှင့် စဉ်းစားပြီး ပြောရင် သံရုံးဝန်ထမ်း များက နအဖ ကိုယ်စားပြု နဲ့ boat trip လိုက်သူ တွေက နအဖ အားပေး ပုဆိန်ရိုးတွေ ပေါ့၊
မြန်မာပြည်ကလာတဲ့ မြန်မာဆိုရင် မြန်မာအရေးနဲ့ တိုက်ရိုက် သက်ဆိုင်တာပဲ့။
UK မှ ဒီမိုကရေစီ ရဲအရသာခံပြီး ဘ၀မမေ့လေနဲ့ ဗျို့…………..
စည်းဆိုတာ ထားရတယ်ကိုယ်လူ၊ စည်းကမ်းမဲ့လို ခရီးလမ်းနှစ်ရှည် ခဲ့တာကိုလည်း အမှတ်ရပါ။ မင်းလူလို စဉ်းစားရင် မြင်မှပါ။
whitelighter ... တကယ်လို့ သံရုံးနဲ့ အပက်သက်တဲ့ လူတစ်စုဟာ စိတ်အမောတွေ ပြေပျောက်ဖို့ အပန်းဖြေရုံသက်သက် လိုက်သွားကြတယ်ဆိုရင် ခင်ဗျား ဘယ်လိုပြောမလဲ။
ယူကေမှာဘ၀မေ့နေရင် ဘလော့မှာ အချိန်တွေကုန် စာတွေတင်ပြီး ရေးနေစရာ အကြောင်းမရှိဘူး။
ခင်ဗျားပြောတဲ့ စည်းဆိုတာကို ထားနိုင်ဖို့ ကျွန်တော် ဒီကွန့်မန့်ကို စရေးတာပါ။ စည်းမထားဘဲနဲ့ လျောက်ရေးမိရင် ကျန်တဲ့ မဆိုင်သူတွေပါကုန်မှာစိုးလို့။
လန်ဒန်လို နေရာမှာနေပြီး အခြေအမြစ်မရှိ အဆင့်အတန်းမရှိ ယုတ်ရင်းကြမ်းတမ်းတဲ့ အရေးအသားတွေ မကောင်းပါ။လူလိုတွေးပြီး လူလိုနားလည်နိုင်ပါစေဗျာ။ lee said...
ကိုထိုက်.....ခင်ဗျား ကိုယ်တိုင် ဘာတွေများ လုပ်ပြီးပြီလဲ။
We appreciate your kindness to Burmese people but I would suggest that if you are really sympathy on Burmese people why don't you go back and save these people. Why are you enjoying yourself in the UK and you did enjoy the boat trip. You did enjoy free food from what so called idiots. I believe that the people have the right to enjoy their lives. NO body can stop from that anyway. dont you scare that the people in those picture will sue you because you have no right to put in your website without permission from those people. I hope you are not going to delete this comment.
whoever created this comment and website about boat trip shame on u coz is not ur business anyway dont u have some work to do instead of criticism and blaming culture.
To Sulai, I have never seen any comment has been deleted by admin, so no need to worry about it.
I don’t know what do you try to say in your comment? I believe that you can read Burmese and what he wrote on his blog. Read it carefully and try to understand it. He just says to drawaline between people and junta’s followers.
If you can’t even make this line between us, don’t even think about Freedom for Burma.
Our revolution had failed because of the people like you.
Do you know that Junta makes clear line between people? If you go and make friend withamember of NLD party or 88 generations, what do you think of junta reaction? What will they do to you? Go to play and sleep with your level of understanding! Don’t come near to adult talk in here.
Asahuman, you have to do your best where you are standing. Does it matter where that person live? The word you just said in above comments come form the mouthpiece of junta newspaper after all.
Hahaha … Think carefully of real ground situation. I feel really shame for you that knowing nothing about true situation of BURMA, Shame for you to say that you are Burmese.
To Ygnman, it is really good news to read in your link, but I don’t seeapoint that arguing in this post. Are you working in this program?
I want to quoteaword from gulu who left comment before here … there are other3fingers pointing at you while you point your index finger to someone.
We all know that what he had done so far.
Just ask yourself who really are you?
...I just came back from "Laputta"...:P
Blogger Ethic ။
ဖြောင့်မတ်ရိုးသားခြင်းဟာ ယုံကြည်မှုရရှိဖို့ အခြေခံအုတ်မြစ်ပါပဲ။ သည်စည်းမျဉ်းတွေကို လိုက်နာကျင့်သုံးတဲ့ ဘလော့ဂါတွေဟာ ကျင့်ဝတ်နဲ့ညီတဲ့ စာပေးရေးသားမှုသာမက မိမိအပေါ် ယုံကြည်အားထားတဲ့ စာဖတ်သူတွေပါရရှိမှာဖြစ်ပါသည်။
အပြောင်းအလဲဘာတွေဖြစ်သွားပြီလဲဆိုတာ အတိအလင်းမပြောဘဲ ဓါတ်ပုံအကြောင်းအရာတွေမှာ အမှတ်မှားအောင်လုပ်တာမျိုးမလုပ်ရပါဘူး။
နည်းပညဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားမှုရှိအောင် ဓါတ်ပုံ သုံးတာကိုပဲ လက်ခံသင့်ပါတယ်။ အညွှန်းစာနဲ့ဓါတ်ပုံရှင်းလင်းချက်တွေထည့်ပေးရပါမယ်။
မသေချာမှန်းသိတဲ့ သတင်းမျိုးကို မရေးသားပါနဲ့။ တကယ်လို့ဒွိဟဖြစ်စေတဲ့ သတင်းမျိုး ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်လည်း သည်သတင်းဟာ သံသယရှိဆဲ သတင်းဖြစ်ကြောင်း ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖော် ပြရပါမယ်။
ကျင့်ဝတ်နဲ့ညီအောင် နေထိုင်တဲ့ ဘလော့ဂါတွေဟာ သတင်းနဲ့အကြောင်းအရာကို သတိနဲ့ ကိုင်တွယ်ရပါမယ်။
ဘလော့ဂါတွေဟာ- ၀က်ဘ်ဘလော့ဂ်မှာ ဖော်ပြခံရလို့ အကျိုးယုတ်သွားနိုင်တဲ့သူတွေအပေါ် စာနာကြောင်းဖော်ပြရပါ မယ်။ ကလေးတွေနဲ့ပတ်သက်ရင် အထူးသတိထားရပါ မယ်။- ၀မ်းနည်းကြေကွဲစရာအဖြစ်ကိုခံစားရသူတွေအကြောင်း ရေးရင်း၊ အင်တာဗျူးရင် သို့မဟုတ် သူတို့ ဓါတ်ပုံတွေသုံးရင် ဂရုစိုက်ပါ။
- သတင်းရှာဖွေရေးသားတာဟာ ထိခိုက်မှုနဲ့စိတ်မသက်မသာဖြစ်စေနိုင်တယ်ဆိုတာ သဘောပေါက် ပါ။ သတင်းရှာဖွေတာဟာ မောက်မာထောင်လွှားဖို့
- ပုဂ္ဂလိက လူအများစုဟာပြည်သူ့အမှုထမ်းနဲ့ အခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေလို ပါဝါရှိဖို့၊ သြဇာညောင်းစေဖို့၊ လူအများစိတ်ဝင်စားခံချင်လို့ ကြိုးပမ်းနေသူထက်
ပိုမိုသိုသိပ်စွာနေထိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကို သတိထားပါ။ လူတစ်ဦးချင်းစီမှာ ကိုယ်ပိုင်လွတ်လပ်ခွင့်ရှိပါတယ်။
- စိတ်သက်သာစရာကောင်းတာကိုပဲ ဖော်ပြပါ။
- အမှားရှိရင်ဝန်ခံပြီး အမှန်အတိုင်းပြုပြင်ရပါမယ်။
- ၀က်ဘ်ဘလော့ဂ်တစ်ခုစီရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကိုရှင်းပြပြီး သည်အကြောင်းအရာအပေါ်လူထုစကားသံနဲ့ ဘလော့ဂါအမြင်ကိုဖိတ်ခေါ်ရပါမယ်။
- စိတ်ဝင်စားမှု၊ ပေါင်းစည်းဆက်နွှယ်မှု၊ လှုပ်ရှားမှုနဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာဆောင်ရွက်ဖို့ အစီအစဉ်တွေ အားလုံးကို အတိအလင်းဖော်ပြရပါမယ်။
- တစ်ဖက်ဖက်ကို မျက်နှာသာပေးတဲ့ သတင်းမျိုးကိုဂရုစိုက်ရပါမယ်။ အဲသည်လိုသတင်းမျိုးကို လက်ခံမိရင်လည်း မျက်နှာသာပေးထားတဲ့အကြောင်း
- တခြားဘလော့ဂါတွေရဲ့ကျင့်ဝတ်မညီတဲ့ အပြုအမူတွေကိုဖွင့်ဟပြောဆိုပါ။
- သူတို့လိုက်နာတဲ့စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းတွေကိုလည်း လက်ခံရပါမယ်။
ကိုထိုက်....Photo တွေကြည့်သွားတယ်.ရေးတာတွေလည်းဖတ်သွားပါတယ်. မြန်မာတွေရဲ သွေးစည်းညီညွတ်မှုကို ပျက်သွားအောင် အတင်း အနေနဲ့ ဖော်ပြထား တဲ့ ဆောင်းပါးလို့ပဲ ပြောချင်ပါတယ်..
ကိုထိုက်တို့ Boat trip မှာ အားရပါးရ မုန့်ဟင်းခါးဝင်စားတဲ့ photo တော့မပါဘူးနော်.. ၁၀ပေါင်ပေးရလို. တန်အောင်စားနေတာလားထင်ရတယ်..
ဗွီဒီယိုကင်မရာနဲ့ ရိုက်ထားတဲ့ ပုံတွေရှိပါတယ်.. ဒီပို့စ်မှာ နောက်ဆက်တွဲ ဆိုပြီးဖော်ပြချင်ရင်တော့ ကူညီပေးဖို့ စဉ်းစားပေးမယ်လေ၊ ဘယ်လိုလဲ..
London မှာမြန်မာလူဦးရေ တော်တော်နည်းပါတယ် . အဲဒီထဲက ၉၉% က မြန်မာပြည်ကြီး တိုးတက်ဖို့ လိုလားသူတွေ ပါလို့ ပြောနိုင်ပါတယ်.. (မလိုလားသူတွေ ဆိုရင်လည်း ကိုထိုက်တို့ ဒီမိုပက်ပါရက်ဇီ တွေလက်ချက်ကြောင့် နာမည်ကျော်နေလောက်ပြီ).. အများစုက မြန်မာပြည်အတွက်အလှူငွေ ထည့်ရင် စိတ်ရော လက်ရော အားပါတဲ့လူတွေ ပါ. ဒီ Boat Trip ကလည်း နာဂစ်မဖြစ်ခင်ကတည်းက London က မြန်မာလူမျိုးတွေ ဆုံတွေ့ရင်းနှီး အားပေးဖို့ကြိုတင် စီစဉ်ထားတဲ့ ပွဲလေးပါ.. UK မြန်မာအသင်းက စီစဉ်တယ်ဆိုတာလည်း ကိုထိုက်တို့ အသိပါ။ နယ်ပယ်စုံက မြန်မာတွေ ပါပါတယ်.. အမိမြေကို လွမ်းတဲ့စိတ်တခုနဲ့ ဆုံဖြစ်ကြတဲ့သူတွေလည်း အများကြီးပါပါတယ်.. (ဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့ ကိုထိုက်တို့အဖွဲ့လည်းပါတယ်).. နာမည်ကြီး လူငယ်အကျိုးပြု ဘလော့ဂါ တွေလည်းပါတယ်.. မလွှဲသာလို့ သွားတက်ကြတဲ့ လူတွေလည်း ပါနိုင်တယ်လေ.. မဟုတ်ဘူးလားဗျာ..
Photo ထဲက Boat Trip သွားတဲ့လူတွေကို နိုင်ငံတော် သစ္စာ ဖောက်ကြီးတွေလိုလို.. နာဂစ်အတွက် ဘာမှကူညီမှု မလုပ်သူတွေလို ပြောတာတော့ စိတ်မကောင်းဘူးဗျာ.. သေချာလည်း ကြည့်ပါဦး.. တချို့ဆို London မှာ အလှူခံရာမှာ အချိန်ကုန်ခံပြီး ကူညီတဲ့သူတွေပါ.. ဒါတွေကို သိသိကြီးနဲ့ ရန်-ငါ စည်းပြတ်အောင်ဆိုပြီး အကြောင်းပြရင်း ကွန်မြူနစ်တွေလို မျက်နှာဖုံးတပ် စွပ်စွဲတာမျိုးတွေ လုပ်တာများရင်တော့ တဖက်အသင်းအတွက် ဂိုးသွင်းပေးသလိုပဲ ဖြစ်နေမှာပေါ့.. ကိုထိုက်တို့တွေ လုပ်လို့ သြဇီက နာမည်ကြီး တယောက်လည်း တော်တော် စိတ်နာသွားပြီဗျာ..(သူ့ဘလော့မှာ သူ့အတွက် မခံနိုင်လို့ စံချိန်တင် ကွန်မန့် တစ်ရာ့သုံးဆယ်ကျော် ၀ိုင်းရေးပေးထားကြပါတယ်).. ကိုယ့်ဘက်ပါအောင် မစည်းရုံးနိုင်ရင်လည်း တဖက်ကို ပါသွားအောင်တော့ တွန်းမပို့လိုက်ပါနဲ့.. ဒီလို အဆင်ခြင်မဲ့လုပ်ကြလို့လည်း ဒီမိုအရေး အားပျော့ အားလျော့လာတာ အနှစ် ၂၀ ရှိပြီဗျာ..
လူ့အခွင့်အရေး အပြည့်အ၀ရမယ့် ဒီမိုဒီမို နဲ တကြော်ကြော်အော်ရင်း London မှာရှိတဲ့ လူလေး ၂ ယောက် ၁ပိုင်းကို သွေး ခွဲ စွပ်စွဲ အတင်းပြောနေတဲ့ ခင်ဗျား …ဒီမိုကွန်မြူနစ် ဖြစ်နေပြီလား..ကြည့်ကျက်လဲ လုပ်ပါဦးဗျာ..
P.S : 'lee' ဆိုတဲ့ နာမည်နဲ့ comment ပေးတဲ့ ပုဂ္ဂိူလ်၊ ခင်ဗျားက မြန်မာအမေ ကမွေးတာမဟုတ်ဘူးလား ..မြန်မာအမျိုး သမီးတွေလည်း ဒီဘလော့မှာ စာလာဖတ်တာကိုသတိထားပါ.. ခင်ဗျား မြန်မာသွေးစစ်တယ်ဆိုရင်ပေါ့ ..
To minthant,r u the owner of this website?casue i just want to tell the persone who has taken the pictures of the people on the boat trip n put on this website. I don't know anything about politic or I don't really interested in it.All i care is ,just the photo that ko htike took it with his camera, cause to be honest i was in that boat trip with my firends n family, and he has no right to take our picture n put it on this website without our permission.I could sue him.we went to the boat trip casue we never been n we just want to enjoy our sighseeing with friends, is that criminal?I think is not really fair for the people like us.For ur information, we have donate lots of money to the people who r homeless n starving, our relatives even went to the villeges n donate the medicine to the people who r in need.we done as much as we could.But we can't just stop having fun, we have to get on with our life as well.we went to the boat trip,that doesn't mean that we don't care about the people in burma.Has anyone who is saying all these comment, donate anything for the people in burma, have u pray for them,do u go there n help them? All u guys r doing is just,gossipping.Let me ask u all one question, do u guys stop going out with friends,stop having fun with them,stop watching tv,n stop doing whatever u doing in ur life to make u happy casue of the bad situation in burma. we can't just stop doing , whatever we r doing, we can only help as much as we could, the rest is up to god.My point is,why ko htike need to take 92 pictures of those people, why can't he take4or5pictures of all the people , not like indivitual family or person.That is totally not fair.Half of the people on that boat trip might help as much as they could for the people in burma by donating money n things.u never know.i hope ko htike understand what i'm trying to say here n take some of the pictures off from the website which isn't necessary to put on the website.
ကို ထိုက် ကြီးက
ဆန်းစ လကို ခွေးလိုပင့်အူ
လယ်တီပဏ္ဍိတ ဦးတုတ် ကြီး
Bloggers may find their messages blocked by Myanmar's military regime, but that hasn't stopped Nyi Lynn Seck from raising tens of thousands of dollars for cyclone survivors through his website.
Now, the 29-year-old IT specialist and his friends are getting their hands dirty and putting the donations to work by helping to build "Budget Huts" in the Irrawaddy delta,aregion still reeling from the May 2-3 killer storm.
Nyi Lynn Seck picked up his black leather laptop bag and pulled outastack of slides he shows to would-be donors. He also has two models of wood-and-blue plastic shelters, dubbed "Budget Huts."The group, which calls itself "Handy Myanmar Youths" because it wants to lendahand to survivors, has put up 88 huts in delta villages.
Due to tides, the volunteers are unable to return to Labutta on the same day, so they usually spend at least one night sleeping on the bare ground without shelter from mosquitoes. Several have fallen ill."Now the biggest problem is that we're having trouble finding wood in Labutta, and the wood is also getting very expensive," Nyi Lynn Seck said.
As long as there are funds and donors, hopefully we can keep this up for another two to three months here," he said. "But I'm not so sure about the future."
: :Ko Htike,he's not like you drinking "STELLA ARTOIS",getting benefit from UK government & no NHS cover.
There areafew people who admire SPDC and enjoy involving in their circle.
If they are in Burma, they will definitely be strong leader/member of USDA.
Nobody is saying close your door and cry your eyes out.
We are saying this is not an appropriate time for celebrate. It can either postpone or turn it into Nargis cyclone fund raising event.
People here are organizing music concerts throughout the US and raising fund for the cyclone victims.
I support Ko Htike's hard work. It is informative and every Burmese should know this event.
Also, this will wake those people up and give themachance to learn how the rest of Burmese will see the event like this.
Inaway they are indirectly supporting SPDC and their organize event.
I believe there are many ways to relax and enjoy your weekend especially in London.
I disgust SPDC and their act. Therefore, I will stay away and will never get involve in their parties and events to show our vote.
If Ko Htike forward this news to Singapore, US, Japan and others fellow bloggers and collect the vote/survey from the viewers, we will see who is right or wrong.
CMS doesn't seem like Ko Htike for some reasons. It’s rather personal attack than Ko Htike news. I might be wrong.
Ko Htike, as far as I know about the photo usage in your blog, for any identifiable person in your picture, you'll needasigned model release. Some agencies only accept digital releases, not faxed, mailed or hard copy releases. But in this case you can use the picture because of those people from your picture are not models, Celebrities and rather like tourist snapshot taken in "the public domain".
I think in that case there is no need to put those pictures which are taken by ko htike in boat trip and i believe that he was one of them having fun on that boat. Who can say that he wasn't enjoying that trip. Can you guys read his mind? How about if he goes back to burma and take some photo of who are having fun in burma and enjoying their life without any worries? why he staying in uk and enjoying his life taking photo of good people? I saw somebody said idiot, evil etc..
how can you say those words to that people. Just think about it do you guys really knows about them or their background. everyone has brain right? just think!!! can anybody put this right attitude?
i believe that ko htike would have been in buema coz there are plenty of photo to be taken in burma.
နအဖ ကျွေးသောမုန့် ဟင်းခါး ကိုဝင်ဆွဲပြီး..နအဖနဲ့ မဆိုင်တဲ့ London မြန်မာများကို အိုးမဲသုတ်မိသော ကိုထိုက်တို့ အဖွဲ့ ပြန်လည်ဆင်ခြင်တောင်းပန်သင့်ပါတယ်.
I agreed with you."blogcomment"..
Fighter(Ko Htike) said...
But in this case you can use the picture because of those people from your picture are not models, Celebrities and rather like tourist snapshot taken in "the public domain".
...You guys better go to "Ayerwaddy" and takes Photo...there will be more interesting Photo...
To Blogcomment: I totally agree with you. We have photograph of Ko-Htike and the team who are enjoying theirselves in the boat trip.
Obviously this is notamajor interesting news for the readers. It was understood that the pictures wereasnapshorts.
It was deliberately focused on the families and guests who came to the boat trip. I wonder whether Ko-Hitke has not got anything to bring on this website to create hisagood charming work.
I believe this is not quite right and it may mislead the readers of this blog. If I were him I will persuade the other side of people who may against me. This is waht you calledapolitic.
I also accept that rather than persuading Burmese by highlighting this boat trip they may be dividingasmall population of Burmese in London. It should be like that actually.
A snapshort does not count 91 pictures. A snap short means just one or two pictures, thats all. I am now counting the pictures which are more than3snap shorts.I appeared to be taken delibrately and it is obviously something is not right. Ko-Htike is not participating in the photograph compition on the Wedsite, isn't he? I believe Ko-Htike will understand how has insulted Burmese poeple with these pictures.
ဒီ Boat Trip ကလည်း နာဂစ်မဖြစ်ခင်ကတည်းက London က မြန်မာလူမျိုးတွေ ဆုံတွေ့ရင်းနှီး အားပေးဖို့ကြိုတင် စီစဉ်ထားတဲ့ ပွဲလေးပါ..
ဒီပွဲက နအဖ လက်အောက်ခံ မြန်မာသံရုံးကဦးဆောင်တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ သံရုံး (London) မှ ဝန်ထမ်းများနှင့် လန်ဒန်ရောက် မြန်မာများ ဦးစီးတည်ထောင်သည့် မြန်မာအသင်းကြီး (ယူကေ)မှ ကြီးမှုးပြီး လုပ်တဲ့ပွဲဆိုတာ လူတိုင်းသိတယ်..
ဒီပွဲကို နအဖကို ခါးသီးစွာ ဆန့်ကျင်တဲ့., နအဖနဲ့ပတ်သတ်တဲ့ သံရုံး (London) မှ ဝန်ထမ်းများကို အမြဲပြစ်တင်ဝေဖန် ရှုံချနေတဲ့ မင်းလိုကောင်က နအဖ လက်အောက်ခံ မြန်မာသံရုံးနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ပွဲဖြစ်ပါတယ် ဆိုတာသိသိကြီးနဲ့ မင်းကိုယ်တိုင် ပါဝင်ဆင်နွှဲခဲ့တယ်.. .
ဒီပွဲမှာ မင်း နအဖနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့သူ အားလုံးကို အရောတဝင် နေခဲ့ပြီး နအဖနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ သူတွေချက်တဲ့ မုန့်ဟင်းခါးကို ကိုထိုက်ဆိုတဲ့ ဒီ Post ကိုရေးသူ က Boat trip မှာ အားရပါးရ မင်း မုန့်ဟင်းခါးဝင်စားတဲ့ photo တော့မပါဘူး.. ၁၀ပေါင်ပေးရလို. တန်အောင်စားနေတာလား ထင်ရတယ်..
ပြီးတော့မှ မင်းက ဒီပွဲလာတဲ့သူတွေကို Post နဲ့ ''ဒီလို အချိန်၊ ဒီလို အခါမျိုးတွင် မြန်မာလူမျိုးများ မည်သို့သော နှလုံးသားများဖြင့် အပျော်သက်သက် ခရီးထွက် အပန်းဖြေနိုင်သည်ကို နားမလည်နိုင်အောင် ဖြစ်ရပါသည်'' ဆိုပြီးရှုံချတယ်..
''ထိုသို့ မြန်မာ လူမျိုးများ များနေသေးသ၍ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံကြီးသည် စစ်ဖိနပ်အောက်မှာ ပြားပြားဝပ် နေရဦးမှာ ဖြစ်ပြီး၊ .. အနာဂတ် မျိုးဆက်သစ်များသည်လည်း နောက်ထပ် အာဏာရှင် လက်အောက်မှာ ဆက်လက် လည်စင်းခံ နေရဦးမည် ဖြစ်သည်။'' ဆိုပြီးထောက်ပြတယ်..
ဒါဆို ဒီပွဲကို မင်းကိုယ်တိုင် ပါဝင်ဆင်နွှဲခဲ့တော့ မင်းလဲဒီပုပ်ထဲကဒီပဲ ဘဲပေါ့ကွ. မင်းအနေနဲ့ ပြစ်တင်ရှုံချရင် မသွားပဲ ပြစ်တင်ရှုံချပေါ့ကွ..
အခုသွားလဲပျော်ခဲ့တယ်.. ကျွေးတဲ့ မုန့်ဟင်းခါးကိုလဲ မင်း ၁၀ပေါင်တန်အောင်စားခဲ့တယ်.... ပြီးတော့မင်း Blog ပေါ်ကနေ သွားခဲ့တဲ့သူတွေကို လက်ညှိးထိုးတယ်..
တော်တော်မိန်းမလိုမိန်းမရ ဆန်တဲ့ Two Face လုပ်ရပ်ဘဲ..
နအဖကို သံဃာတော်တွေတောင် ကံဆောင်ထားပြီး … သံဃာသတ်၊ လူသတ်နေသော အာဏာရှင်ရဲ့ ဒေါက်တိုင်တွေကို ထောက်ပံပေးနေသော အထောက်အပံတွေ အဖြစ် မြန်မာလူမျိုးတွေ ဖြစ်မလာအောင် လူတွေကို နှိုးဆော်ခြင်တယ် ဆိုရင်လဲ ကိုယ့်လိပ်ပြာကိုယ် အရင်သန့်အောင် လုပ်ပြီးမှဦးနောက်နဲ့ အလုပ်လုပ်ပေါ့ကွာ.. ကိုယ်ကိုကိုယ် ဟုတ်လှပြီထင်ပြီး တခြားမဆိုင် သူတွေကို မစော်ကားပါနဲ့.. ဒါပဲ..
I support MUMMY what she said was absolutely true nothing but the truth. He was trying to divide Burmese people's relationship from Burma and the UK. Is this called NLD organization? They also accused these people from the boat trip that because of us the NLD failed. Can I ask Ko-Htike something? You may also be using NLD's name for your survivals to stay in this country or because you have stay in the country you think that you can do this sort of jokes to divide Burmese people? I wonder people like you used NLD's name to stay in this country. After that encouraging two parties to fight each other. Ko-Htike shouldn't be on the boat trip if he wanted to accuse people who joined trip. I think it is digusting. You are not doing organisation for free Burma. You are one of the people dividing Burma into two parts. If you do that again, your organization will never be achieved and your NLD will be failed and failed again. If you really want to achieve your campaign you need to follow the proper way of approaching opposition party rather than fighting with them. Message for Ko-Htike is I am not from Junta's side or from NLD side. I am entirly different from you people. But I know what policitic all about. Sometimes you have to use your brain before you do this sort of jokes. Ko- Hitke you are comparing two photos together which are the children and the people boarding on the boat trip day. What are you trying to do? You delibrately making hateness to BUrmese each other. This is what you called your organization? Because mate. Because you have the power to disclose the information on the Website do not use that power asaweapon to fight our National People. It does not go anywhere.
20 June 2008 at 07:08
အခုသွားလဲပျော်ခဲ့တယ်.. ကျွေးတဲ့ မုန့်ဟင်းခါးကိုလဲ မင်း ၁၀ပေါင်တန်အောင်စားခဲ့တယ်....
These3guys had3plates(မုန့်ဟင်းခါး) each.They were eating like HELL..
I m the one of persons who making party in london. what i want to say is just this is not ur stupid bussiness to put my pictures in this bloody web sites. This is first warning to tell you.. Next time i am not telling you comement to comment,, i will want you to sort this problem at court... if you are bravy, you are right , just leave those pictures like that.... okay?
While NLD party and their members celebrate birthday party, ... then people arrested by SPDC's dogs.
Now you guys are complaining about SPDC's followers party.
YANGON - Fourteen people were arrested afterapro-junta militia broke upaprotest calling for the release of Myanmar democracy leader Aung San Suu Kyi,asecurity official said Friday.
Dozens of Aung San Suu Kyi's supporters stagedasmall protest Thursday to mark her 63rd birthday, which she spent alone and under house arrest.
A pro-junta militia broke up the small rally outside the headquarters of Aung San Suu Kyi's National League for Democracy (NLD) party, beating some of the protesters, witnesses told AFP.
Fourteen people -- includingaBuddhist monk -- were arrested, according toaMyanmar security official, who spoke on condition of anonymity because he is not authorized to speak to reporters.
The protesters had gathered early Thursday to mark the Nobel Peace Prize winner's birthday by making religious offerings to Buddhist monks and nuns.
Later,asmall group on the pavement began shouting for Aung San Suu Kyi's freedom, but the militia broke up the protest within minutes.
The military regime has long ignored international demands for her freedom, which were renewed Thursday by Britain, France and the United States.
i agree with daddy. whoever he is i am agree with him and boat trip is nothing to do with ko htike. he just making that he is really care for burmese people which is he doen't. if he really care why he staying in uk? why can't he just go back and save burmese people? Also everybody has right to make their life happy and enjoy right?someone said (those animal) i think he doesn't know how to enjoying his life maybe one day he will enjoy his life in hell. ko htike has no brain i think he don't even know what he is doing!! Oo.. poor ko htike...
I dont want say what Ko Htike did was right or wrong. Some people are talking about taking legal action but my idea is your actions are all aboveboard. Visit UK photographer's right website (pdf)
if someone wants to go against with legal, go on ...
i would like to see how it would be done,
might be another front page news in london.
and there will be more clear line between Pro-Demo side and Junta side.
I think ko htike wont mind as well if you go against legal.
"Bloody Ko Htike" i don't care your "Bloody NLD",i don't care "Bloody SPDC"..i just care our people where ever we are....
နအဖ အားပေး ဗမာတွေ
မွေးတဲ့မြေ၊ ကိုးကွယ်ရာမှ မထောက်
မအေကိုကျော် ဒွေးတော်နအဖ လွမ်းပါလို့
နှီးနှောကာ မပြော လိုပြီး
UK မှ PR ရသလို့ပ
ငရဲပြည်မှ PR ရမဲ့ကောင်တွေ…..
ok, I think you guys are the best person who care Burmese people, well ... it is good to know ...
Thanks God, i am so so glad for the behalf of Burmese people. How lucky they are ...coz you care so much!!
After hands shaking with junta who got blood stain on hands then you care for the people of Burma ....
Burmese people are the most luckiest people all over the world that they got take care of someone like you guys..
ကိုထိုက်ရေ အစကတော့ မင်းပိုစ့်ကို ဖတ်ပြီးတော့ အဲဒီဓါတ်ပုံထဲကလူတွေကို တော်တော် အထင်သေးတယ်။နောက်ကျမှာ အဲဒီပွဲက မုန်တိုင်းမကျခင်က စီစဉ်တဲ့ပွဲဆိုတာ ။ မင်းကိုယ်တိုင် အဲဒီပွဲ မှာ မုန့်ဟင်းခါး ၀င်ကြိတ်ခဲ့တယ်ဆိုတာရယ် ခိုးကြောင်ခိုးဝှက်နဲ့ ဘလော့မှာ တင်ဖို့ အရေး ဓါတ်ပုံ ခိုးရိုက်နေတာတွေ သိတော့ မင်းကို တော်တော် ရွံတယ် မင်းမို့လို့ မရှက်။ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကလည်း မလွတ်ပဲနဲ့ သူများကို လျောက်မရေးနဲ့ ။ မင်းပြောတော့ နအဖ က မကောင်းဘူးတဲ့ မင်းကရော နအဖ လိုပဲ ကိုယ့်အပြစ်ကို ဖုံးဖိပြီး သူများအပြစ်ကိုရေးတယ် ရှက်တတ်ရင် သေလိုက်တော့ကွာ။ ဇကော လောက်မှ စောက်မနက်။
20 June 2008 at 13:39
Regard to OL's statement "I don't care your Bloody NLD", this is the real attitude of USDA hard liner.
Now, it is very sad to learn that SPDC are successfully recruiting USDA not only in their own country.
They are sending their top USDA thugs to London asareward.
Some SPDC supporters want to take Ko Htike to the court for their photos. They can try their luck.
In the main article said, Ko Htike was surprise to see some of those in this boat trip who are seeking Political Asylum to the UK Government. Those people will be in big trouble if UK Home Office/Immigration Dept seen these photos. Because they claimed to the UK government that their live is in the danger from SPDC, and they are partying hand in hand with SPDC.
BTW: I am not Ko Htike. Also, nothing wrong with Ko Htike drinking "STELLA ARTOIS" and taking on that trip to withness the event. He might have to pretend that he is enjoying. Otherwise, USDA thugs will beat him up and throw him from the boat.
အနက်မှာ အ၀ါစင်းနဲ့ အနဖ ကျား
ဦးပုတ်စောင့်တဲ့ ကိုရွှေကျား နအဖ ဘက်တော်သား
...Oppss..poor Ko Htike :D
ဒီမနက် ကိုမောင်လှဘလော့မှာ ကြည်ညိုပါရစေဆိုပြီး ကိုညီလင်းဆက်တို့အုပ်စုကို ချီးမွမ်းထားတာ ဖတ်ရပါတယ်။ ကိုယ်စိတ်ထဲလည်း သူပြောတာနဲ့ ထပ်တူမို့ အထူးအတွေထပ်မပြောတော့ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ဒီပို့စ်လေးကို ဖတ်ပြီး ရေးချင်တာလေးတွေပေါ်လာလို့။
သူများတွေတကယ်အလုပ်လုပ် ကူညီပေးတဲ့ကိစ္စတွေ ရေးနေတဲ့ ဘလော့မှာတောင် ဒါမျိုးဝင်လုပ်ကြတယ်။ ခွေးနဲ့ နှိုင်းရင်တောင် ခွေးသိက္ခာကျမှာစိုးလို့ မနှိုင်းတော့ပါဘူး။ ဒီလိုလူမျိုးတွေ လက်တွေ့ ဘာတွေလုပ်ခဲ့ဖူးလဲ ယုတ်စွအဆုံး ဒုက္ခသည်တွေကို ဆန်တစ်ဆုတ် ရေတစ်မှုတ် ပေးဖူးလား။ UK လို ဟိုးအဝေးကြီးမှာနေပြီး အကူအညီ မပေးနိုင်ကြရင်တောင် မနှောင့်ယှက်သင့်ဘူး။
လန်ဒန်လို နေရာမှာနေပြီး အခြေအမြစ်မရှိ အဆင့်အတန်းမရှိ ယုတ်ရင်းကြမ်းတမ်းတဲ့ အရေးအသားတွေကို ဖျက်လိုက်တယ်။ နောက်တစ်ခါ ထပ်မရေးနိုင်အောင် IP ကိုဘန်းလိုက်တယ်။ ဒီလို လူတွေရှိနေတာ မြန်မာဘလော့ဂါလောက သိက္ခာကျတယ်။ ပြောမရရင် သက်ဆိုင်တဲ့ ISP တိုင်တော့မယ်။
IP address 81.99.210.139
NLS | 06.17.08 - 2:09 pm | #
ခင်ဗျားတို့ ဒီလောက် ပြောမှတော့ ကျုပ်ပြောပြရမယ်။ ကျုပ်က ကိုထိုက်တော့ မဟုတ်ဘူး။ ဒါပေမယ့် ကိုထိုက် ဆီဗောက်ကို admin လုပ်ပေးထားပြီး သူနဲ့ သိတဲ့ လူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။
ကျုပ်သိထားတာ တစ်ခု ပြောပြမယ်။ သူက အဲဒီပွဲကို ဒီဇင်ဘာကတည်းက စီစဉ်ထားတာဆိုတာ သိတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ တလကျော် ဖိတ်စာ စထွက်တဲ့ နေ့ကတည်းက သေချာ သွားတယ် ဆိုတာလည်း သိတယ်။ သံဃာတွေ သတ်ခံရတဲ့ ကိစ္စနဲ့ လူတွေ ပူပူနွေးနွေး သွေးဆူစကာလ ကတည်းက သံရုံးက လူတွေနဲ့ သံရုံးနောက်လိုက်တွေ စီစဉ်နေတာ သူသိတယ်။ အဲဒီလို ကာလကတည်းက စီစဉ်နေတယ်ဆိုတာ ခင်ဗျားတို့ တွေးကြည့်။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး ခံစားချက်တွေ လာမပြောနဲ့။ အဲဒီ ဒီဇင်ဘာကာလကတည်းက အခုပွဲဖြစ်လာရင် အခုလို လုပ်မယ်ဆိုတာကို ကြိုစီစဉ်ထားခဲ့တယ်။ မုန်တိုင်းနဲ့ ဘာမှ မဆိုင်ဘူး။ မုန်တိုင်း ကိစ္စက နောက်ထပ် add on ကိစ္စပဲ ဖြစ်တယ်။
နောက်ပြီး ဖိတ်စာ ရရခြင်းမှာ တင်ဇာမော်ကို ဖုန်းဆက်ပြီး သူသိတယ် ဆိုတဲ့ အကြောင်း အခုလို ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲကို ဒီလို အချိန်မှာ မလုပ်သင့်ဘူးဆိုတဲ့ အကြောင်းကို သူ နာရီဝက်လောက် တင်ဇာမော်နဲ့ ဖုန်းဆက် စကားပြောခဲ့တယ်။ အခုလို လုပ်တာကို သူ လူသိအောင် လုပ်ရလိမ့်မယ် ဆိုတာကို ကြိုတင်ပြောထားခဲ့တယ်။ ဘာတွေ ပြောသလဲဆိုတဲ့ အတိအကျကို သူနဲ့ တင်ဇာမော် ၂ ယောက်ပဲ သိနိုင်မယ်။ ဟုတ် မဟုတ်၊ တင်ဇာမော်ကို မေးကြည့်။
ခင်ဗျားတို့ သိဖို့က လန်ဒန်က တချို့သော မြန်မာတွေ နိုင်ငံအတွက် ထားတဲ့ စိတ်ဓါတ်ရေးရာ ဘယ်လောက်ပျက်ပြားနေသလဲ ဆိုတာ သက်သေပြနိုင်ဖို့ ဖြစ်တယ်။ သံရုံးရှေ့မှာ ခိုလှုံခွင့်မရခင် .. လာအော်တယ်။ ဒီနေ့ပဲ အသေခံ ဗုံးခွဲတော့မယ့် စကားတွေ နဲ့ လျှောက်ပြောတယ်။ သံရုံး ဝန်ထမ်းတွေ တွေ့ရင် ဆဲမယ်ပြုမယ် လုပ်လို့ တားရတယ်။ ခိုလှုံခွင့် လည်းရရော ပထမ အဆင့် မသိချင်ယောင်ဆောင်တယ်၊ ဒုတိယ အဆင့် အင်္ဂလိပ် နိုင်ငံသား လျှောက်တယ်။ တတိယ အဆင့် သံရုံးထဲဝင်ပြီး သံအမတ်ကို ထီးမိုးပေးပြီး visa လျှောက်ပြီး မြန်မာ ပြည်ထဲဝင်တယ်။
မြန်မာနိုင်ငံသား မြန်မာပြည်ပြန်တာ ကိစ္စ မရှိပေမယ့် visa ရဖို့ ခုနလို ပြန်ဖားရတဲ့ အရှက်မဲ့ မြန်မာပြည်သားတွေ ကြီးထွားနေတဲ့ လန်ဒန်ဖြစ်နေတာ ခင်ဗျားတို သိချင်၊ သိမယ်။ မသိချင်ယောင်ဆောင်နေတာလည်း ဖြစ်နိုင်တယ်။ သံဃာတော်တွေအတွက် ရည်မှန်းပြီး လန်ဒန် လမ်းလျှောက်ပွဲ လုပ်တော့ t-shirt တစ်ထည် £5 (£5 ဆိုတာ တီရှပ် ရိုက်ဈေးပဲ ရှိပါတယ်။)ဆိုတာကို ခင်ဗျားတို့ အလကားပေးသင့်တယ် ပြောတတ်ပြီး သံရုံးက ပွဲ အကူအညီတောင်းရင် ကိုယ်ရော ငွေရော စိုက်တတ်တဲ့ လူတွေ ဖြစ်နေတယ်။
စိတ်ဓါတ်ရေးရာအရ အခုလို နိုင်ငံနဲ့ လူမျိုးက လိုအပ်နေတဲ့ အချိန်မှာ အဝေးရောက် မြန်မာတွေ တတ်သလောက် မပံ့ပိုးရင် ကိစ္စ မရှိပေမယ့် ရန်သူနဲ့ ပေါင်းတဲ့ စိတ်ဓါတ်ကတော့ ပြတ်ပြတ်သားသား ဖေါ်ထုတ်ရမှာ ဖြစ်တယ်။
နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်မှာ နိုင်ငံရေးတွက် ဆန္ဒပြတယ်ဆိုတာ သာမန် အခြေခံ လုပ်ရပ်တစ်ခုပဲ ဖြစ်တယ်။ “ခိုလှုံခွင့်တင်တာ သက်သက်၊ ဆန္ဒပြတာ သက်သက်၊ ခိုလှုံခွင့်တင်တိုင်း ဆန္ဒပြရမယ်လို့ စာချုပ်ချုပ်ထားတာမှ မဟုတ်တာ၊ မင်း မသွားလည်း ဖြစ်ပါတယ်” ဆိုတာကို ခိုလှုံခွင့်ရပြီးသား တစ်ယောက်က ခိုလှုံခွင့်တင်ထားတဲ့ လူငယ် တစ်ယောက်ကို သင်ကြား ပြောပြနေတာ ကြားခဲ့ဖူးတယ်။
အခုလည်း မျှော်မှန်းထားခဲ့သလို ခိုလှုံခွင့်တင်ပြီး ပျော်ပွဲ လာရောက်ကျင်းပနေတဲ့ လူတွေ ပုံထဲမှာ တွေ့ရတယ်။ မြစ်ထဲမှာ သင်္ဘောစီးတာ £15 ပေးရင် စီးလို့ရတယ်။ ပျော်လို့ရတယ်။ လန်ဒန်မှာ နည်းမျိုးစုံ ပျော်စရာတွေ ရှိတဲ့ အထဲက ဘာလို ဒီအချိန် ဒီပွဲမှ ရွေးပျော်ရတာလဲ။
ကိုထိုက် ကိုယ်တိုင်လည်း သံရုံးဝန်ထမ်းတွေကို ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ ပြောစရာရှိလို့ စကားပြောဆိုပေမယ့် အလုပ်သဘောအရ ပြတ်ပြတ်သားသား ဆောင်ရွက်တာကို တွေ့ရတယ်။
ဒီတော့ ခင်ဗျားတို့ ဘာလာပြောပြောသူက ဂရုစိုက်မှာ မဟုတ်သလို၊ တရားစွဲမယ် ဆိုတဲ့ ဆရာသမားကိုလည်း သူ့အိမ်ကနေ တရားရုံးက ဆင့်ခေါ်တဲ့ စာကို အေးအေးဆေးဆေး စောင့်နေမယ်ဆိုတာ သူ့ကိုယ်စားပြောပေးလို့ရတယ်။ သူ့အတွက်က အိမ်မပြန်၊ မိဘ ဆွေမျိုးတွေကို အန္တရာယ်ကြားမှာ ရင်းထားပြီး ရှေ့မှာ ဘာမှ ဂရုမစိုက်ဘဲ လုပ်နေတဲ့ လူဖြစ်လို့ ခင်ဗျားတို့ သူနဲ့ အဆုံးအထိ ယှဉ်မိုက်ချင်သပဆို ကြည့်ရသေးတာပေါ့။
တရားစွဲလို့ လူသိရှင်ကြား ပိုပြီးဖြစ်လာဖို့ သူလည်း မျှော်လင့်နေသလို၊ တရားစွဲလို အထက်ပါ ပုံထဲကလူအချို့ ဖြစ်ပျက်မယ့် နောက်ဆက်တွဲ ကိစ္စတွေကတော့ ဆရာသမား တာဝန်သာ ဖြစ်တယ်။
သူကတော့ ဘယ်သူ့ကိုမှ အခုလို တစ်ကြောင်းခြင်း ပြန်တုံပြန်မှာ မဟုတ်သလို သူ လုပ်ရမယ့် အလုပ်ကို မှန်တယ်ထင်ရင် ဆက်လုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ ပုံစံနဲ့ ဆက်သွားနေတယ်။
အပေါ်က စာကတော့ UK က ဘယ်သူလဲဆိုတာတော့ မသိသလို၊ ဘာကို ဆိုလိုတယ်ဆိုတာလည်း မရှင်းဘူး၊ ညီလင်းဆက်နဲ့ ကိုထိုက်ဟာ မိတ်ဆွေတွေဖြစ်ကြတယ်ဆိုတာတော့ ခင်ဗျားတို့ သိစေချင်တယ်။)
20 June 2008 at 20:15
ိုင်ငံ သံရုံး (London) မှ ဝန်ထမ်းများနှင့် လန်ဒန်ရောက် မြန်မာများ ဦးစီးတည်ထောင်သည့် မြန်မာအသင်းကြီး (ယူကေ)မှ ကြီးမှုး၍ လန်ဒန်မြို့ သိမ်းမြစ်(Thames River)ထဲတွင် အပျော်ခရီး သင်္ဘောစီးမည့် အစီအစဉ် ဖြစ်ပါသည်။ ဒီလို အချိန်၊ ဒီလို အခါမျိုးတွင် မြန်မာလူမျိုးများ မည်သို့သော နှလုံးသားများဖြင့် အပျော်သက်သက် ခရီးထွက် အပန်းဖြေနိုင်သည်ကို နားမလည်နိုင်အောင် ဖြစ်ရပါသည်။ ခရီး အစီအစဉ်ကို အောက်တွင် တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။
and you dont mean, that we have to close our door and cry,,, and not to make partiesssssssss.... you dont mean................ we are sleeping with level of our understandinggggggggggg at our house......... who is knocking at our door????????????????? who is trying to wake us up? only You.....
what do you want to do with those picturesssssssssssss? yeah they are not modlesssss and celebraties,,, yeah you are rite,,, but they are very very gentelmen and ladiessssss who you ever seennnnnnn,,,,,,,, trust me,,, now you are pushing those poples to junta. anyway your bussiness is very very low standardddddddd,,, earning money by creating this web sties,,,, showing those pictures to the people,, earning money,, i know you are not earning money,, you just showing how you intrested to the politic,, what you have done for the people... and how you realize to attack to the goverment of burma. that's not my bussiness,,,it's yours... rite?
you are very very long way to go,,,,that's why i m trying to tell you to reach the point what i mean..... okay? just listend,,,,
what are the benefits and facts?
as my opinion i can see disadvantages... peoples are moving back from you....
i dont mind you are attacking to the myanmar goverment and their followerss or not,, but you do mind our peopls go to that boat trip. when we were in boat trip who is talking about politic? have u heard someone talk about politics? we are making parties with junta's staff that u mind.
and the other hand, in myanmar nargis peoples are very sorrow.
i got ur pointsssssss you want to be like superstarsssssssssssss don't you? now everybody intresting about this web site about ko hite////////////////
we have to give you noble prize.
i will definately give you one prize.. give me time to think it which is resonable for you..
everybody have right to choose their leader.. my leader is not myanmar goverment........ you are right,, where you are wrong is u put those pictures in ur web sitessss... that is personal matter. that is very very low standad.. beahigh standard person and attack to myanmar goverment...
ko mint thant,,,,
just listen gentelman
personal tway lar ma pyaw nat..... hote lar????? aku kamyar doth lote nay tar tway ka ka lay ma san bu lar.. ko bar tway lote nay lae so tar thay char sin sar parrrrrr ....
okay? we are talking about our picturessssss.....
how many persons now? so many people telling you aobut the picutressssssss,,,
you are very very away from ur doing thingsssss.....
the best idea is just shut up and delete those picturesssssss
if u guys not happy with that boat trip just go to burmese embassy and complain it.
ko htike or whoever still doing it
we will see u at court.
we dont know about pulitic we r just talking about those picture coz we have right to tell u to delete it.
hey, ko htike
takal that tee shi yin burma mhar taw lan yaee leader twar lote
uk mhar nay pyi web site ko htaung
away ka nay asoe ya ko
water gun nat shooting ma lote nat..
aku de case ka (kalar ma naing loz yakine lar maee tarrrrr)
ko htike (hat mhane kyar htaeeee ka lat thee ma pya natttttttt....)
ko htike (hat mhain kyar htaeeee ka lat thee ma pya natttttttt....)
အြေ်ာ သူ့လိူပဲ "Ayerwaddy Delta" မှာ သွားကူနေတာ ပေါ့ နော်....
၁၊၊.."ပုဂ္ဂိုလ်ရေး ခံစားချက်တွေ လာမပြောနဲ့ " ဒီစကား ကခင်ဗျား ပြောတာနော်..မလွန်ဘူးလားဗျာ..ဒါကိုထိုက်တို့ ခင်ဗျားတို့ လုပ်နေတဲ့ ဒီမိုကရေစီလား
၂၊၊...ကိုထိုက်က မတင်ဇာမော် ကိုဒီလို ပွဲလုပ်ရင် လူသိရှင်ကြားလုပ်မယ်လို့ ပြောခဲ့တယ်...ဟုတ်လား ? ကိုထိုက်က မတင်ဇာမော် ကို warning ပေးရအောင် မတင်ဇာမော်က ukmyanmar အသင်းကြီးက ဥသျှောင်ကြီးဟုတ်ဘူးလေ. မတင်ဇာမော်က အဆိုတော် လေ..
အိုး..ဟိုး..အချစ်ရဲ့ ကျောင်းသူလေး..ဆိုတဲ့ သီချင်းကိုဆိုတာသူပေါ့..
၃၊၊...ဒီ post က comment များတယ်.အများစုက photo တွေကို မကျေနပ်လို့ ..... အများစုနော်.မဟုတ်ပဲအပြောခံရလို့ ဆိုတာကို comment တွေဖတ်ကြည့် အသိသာကြီး..ဒါကိုသိသိကြီးနဲ့ post ကိုမဖြုတ်ရင်.. ဒီ blog မှာတင်ထားတဲ... .no way to get off thrown ဆိုတဲ့ animation ဘေးမှာ ကိုထိုက် မျက်နှာနဲ. no way to delete photos ဆိုပြီး animation ထည့်ဗျာ. ဟားဟား ကိုထိုက်အခု လုပ်နေတာနဲ့ အံကိုက်ပေါ့ ."ပုဂ္ဂိုလ်ရေး ခံစားချက်တွေ လာမပြောနဲ့ " ငါကမှ အမှန်ကွ..ဆိုတဲ့သဘောပေါ့...
ကိုထိုက်တို့ ကြိုးစားတယ်.လက်ခံပါတယ်.ကိုထိုက်တို့ ကိုလဲ ၀ိုင်းဝန်းထောက်ပြရင်လက်ခံလိုက်ပါ..
မဟုတ်ရင်စည်းလုံးမှုပျက်တာပဲအဖတ်တင်တာပေါ့ .ကိုထိုက်တို့ လုပ်နေတဲ့ Theme ပျက်တာပေါ့ .
ကျွန်တော်တို့ အားလုံး" အဝေးရောက်မြန်မာများ"အားလုံး စည်းစည်းလုံးလုံး နဲ့ နေရအောင်ဗျာ ..ဦး zoot ဒေါ်zoot .ကိုကို zoot မမ zoot တွေမလုပ်ပဲ စဉ်းစဉ်းစားစား စုစုစည်းစည်း လုပ်တာကောင်းပါတယ်.
policy အဟောင်းကြီးအတိုင်းခြေမ မကောင်းခြေမတော့ဖြတ်ထုတ်ဖို့ ကြိုးစားမနေပါနဲ့ .ခေတ်ကြီးတိုးတက်နေပါပြီ . အကုန်ကုလို့ ရပါတယ်.နေဦးခင်ဗျားအခုဖြတ်နေတာ ခြေမအကောင်းကြီးနော်...
၅..ကိုမင်းသန့် ..ခင်ဗျားဆရာကိုထိုက်က ...."သူကတော့ ဘယ်သူ့ကိုမှ အခုလို တစ်ကြောင်းခြင်း ပြန်တုံပြန်မှာ မဟုတ်သလို သူ လုပ်ရမယ့် အလုပ်ကို မှန်တယ်ထင်ရင် ဆက်လုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ ပုံစံနဲ့ ဆက်သွားနေတယ်.." လို့ ခင်ဗျားပြောတယ်နော်.
ok ..if ..သူမှားသွားတယ်ဆိုရင်ကော ဆက်လုပ်မှာပဲလား
၆..."သူ့အတွက်က အိမ်မပြန်၊ မိဘ ဆွေမျိုးတွေကို အန္တရာယ်ကြားမှာ ရင်းထားပြီး ရှေ့မှာ ဘာမှ ဂရုမစိုက်ဘဲ လုပ်နေတဲ့ လူဖြစ်လို့ ခင်ဗျားတို့ သူနဲ့ အဆုံးအထိ ယှဉ်မိုက်ချင်သပဆို ကြည့်ရသေးတာပေါ့ " ဒါက ကိုမင်းသန့် ပြောတာ ..ကိုထိုက်အိမ်မပြန် တဲ့အတွက် သူ့ အတွက်အန္တရာယ် မရှိပါဘူး .ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်အာမခံတယ်..
"မိဘ ဆွေမျိုးတွေကို အန္တရာယ်ကြားမှာ ရင်းထားတယ်" ...ဒါတော့မကောင်းဘူး...သူ့ မိဘ ဆွေမျိုးတွေ jail ထဲမှာလားဗျာ ..စိတ်မကောင်းလို့ ပါ...
"ရှေ့မှာ ဘာမှ ဂရုမစိုက်ဘဲ လုပ်နေတဲ့ လူဖြစ်တယ်" ဟုတ်တယ် ..ဟုတ်တယ်..ရေရေလည်လည် လက်ခံပါတယ်..ကျွန်တော်ကျွန်မ တို့ မြန်မာ ပြည်သူများ ရင်ဆိုင်နေရသော ဒုက္ခများအား ကိုယ်ချင်းစာစိတ် မရှိသူများမဟုတ်ပါဘူးလို့ ဝိုင်းပြောနေတာတောင် "ဂရုမစိုက်ဘဲ post with wrong photos တင်နေတဲ့သူ "
"ခင်ဗျားတို့ သူနဲ့ အဆုံးအထိ ယှဉ်မိုက်ချင်သပဆို ကြည့်ရသေးတာပေါ့ " ........ဟုတ်ကဲ့ ဘယ်သူမှ ကိုထိုက်လို မမိုက်ရဲ ပါဘူး ..မမိုက်လို့ နာမည်အမှားနဲ့ မကြီး ရဲလို့blog က photo ကို ဖြုတ်ပေးဖို့ တောင်းဆိုနေကြတာပါ..
၇....ကိုထိုက်တို့ နေကောင်းပါစေ.မုန့် ဟင်းခါး များများ စားနိုင်ပါစေ......
....ကိုထိုက်တို့ နေကောင်းပါစေ.မုန့် ဟင်းခါး များများ စားနိုင်ပါစေ......
ဘီယာ တွေလဲ ဆက်သောက်ကြပါ..."Cheers for Democracy"
Keep doing what you are doing. I am 100% behind you.
အရမ်းကလေးကလားဆန်တဲ့ အခုလို ပို့စ်တွေကို ရှက်တတ်မယ်ဆိုရင်တော့ ပြန်ဖျက်ကို ဖျက်သင့်တယ်။
မဆိုင်တဲ့ London မြန်မာများကို အိုးမဲသုတ်မိသော ကိုထိုက်တို့ အဖွဲ့ ပြန်လည်ဆင်ခြင်တောင်းပန်သင့်ပါတယ်.
Both CMS and Rose said the whole boat was stink due toasingle Barb (Nga Kone Ma).
What do you mean by that? Who is that Nga Kone Ma? Is it the Ambassador Gen. Nay Win or ...?
Ko Htike Admin Ko Min Thant said that this article is meant for the SPDC and their followers. I sympathize for those children who do not understand politic and Ko Htike would exclude them from the accusation.
Who else he should exclude or just leave that Barb (Nga Kone Ma).
I am delighted to hear that War declaration against fake political asylum speech which announced in front of the Myanmar Embassy on Daw Aung Sun Su Kyi birthday.
It isagood intention and about time to sort this out.
....fighter..first you and "Ko Htike" thugs go back to "Ayerwaddy" and help Myanmar people,after that let's talk about that...
23 June 2008 at 19:18
All right thee then.
OL, Well done. Good work and I am really proud of you.
I repeat, I am not Ko Htike and I don't know him either.
I am just browsing Myanmar news and blogs to get updated my current
During the last September Pro Democracy demonstration,afriend of mine introduced this Ko Htike blog along with others activist blog such as Ko Moe Thee, Niknayman and Ko Myo Chit.
I have seen Ko Htike raising the funds for the Nargis Cyclone since 3rd of May 2008.
He hasn't go on parade and set the firework on the Internet about his
Your sound likesalittle boy comparing how many pockets he has in his jean pant with other friends.
Why don't you set upawebsite about your work where we can leave
I won't write nasty thing. Trust me.
I am just get involve in this matter purely because one against many SPDC followers.
I don't care you guys touring around the Thames River by boat or
Although I am not interested in politic, I respect the people who take the risk with their life and fight for the change.
This is the time to boycott any SPDC event to demonstrate that they are on their own.
SPDC Embassy job is to report everything back to Naypyidaw including demonstration and other Myanmar events. Some of them even printed on the national newspaper.
This boat trip will be their major achievement for the embassy and they will get many brownie points for that.
By the way, Counsellor is heading back to Naypyidaw and Ambassador Gen. Nay win will follow soon.
SPDC follower has to restart their process all over again. They have to find the new Ambassador's friends, relatives and the good connection to approach the new one.
ygnman said ...
“မြန်မာတွေ စိတ်ဓာတ်မကောင်းတာ အခုမှတော့ မဟုတ်ဘူး။ ဟိုးအရင် နှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းက
ygnman ခင်ဗျား ...
အဲဒီ မြန်မာတွေဆိုတာက ဘယ်သူတွေကို ပြောတာပါလဲ? မြန်မာတွေ အားလုံးလား?
ygnman ကရော ဘာလူမျိုးပါလဲ?